Badhasaabka Tog-dheer Oo Ka Hadlay Axsaab Jabiyay sharcigii loo dhigay Ololaha Doorashadda | Somaliland.Org
Badhasaabka Tog-dheer Oo Ka Hadlay Axsaab Jabiyay sharcigii loo dhigay Ololaha Doorashadda
November 8, 2012	“Qof kastaa meel buu dabadda kula jiraa, Anigana Xisbigaygu waa KULMIYE, markay ololaha tahayna…”
Burco (Somaliland.Org)- Badhasaabka Gobolka Tog-dheer Cabdoo Axmed Aayir, ayaa markii u horeysay ka hadlay hadal ka soo yeedhay Gudida anshaxa doorashooyinka oo Badhasaabadda dalka ku eedeeyay inay ku milmeen xisbiga KULMIYE.
Badhasaabka Tog-dheer oo xalay Khadka Telefoonka ugu waramayay Tifaftiraha Guud ee Wargeyska DAWAN Cumar Maxamed Faarax,waxa kale oo uu ka hadlay ururo uu ku tilmaamay in ka taraareen anshixii iyo qorshihii Komishanku u dhigeen ololaha doorashadda,
Cabdoo Axmed Aayir oo daba socday hadalkii Gudida anshaxa wuxuu yidhi “Anigu maamulka Gobolka Tpg-dheer ayaan masuul ka ahay, qof kastaana waxa uu xaq u leeyahay inuu meel ka soo jeedsado oo urur ama xisbi siyaasadeed xubin ka noqdo. Anigana (Badhasaabka) xisbigaygu waa xisbi xaakimka KULMIYE oo aan ka tirsanaa illaa 2002-dii markii la aasaasay.”
“Markay Tartanka iyo ololaha Doorashada noqoto waxaan dhex u ahay dhammaan asxaabta tartamaysa oo waajib iga saaran yahay inaan ilaaliyo nabad-gelyada kuna xakameeyo sharciga doorashada u yaala si aan nabad-gelyadda loo waxyeelayn. Balse lama odhan karo xisbi xubin ha ka noqon,:ayuu yidhi Badhasaabka Tog-dheer Cabdoo Axmed Aayir, waxaanu intaasi ku daray “Markaa waxba kama jiraan arrintan ah waxaad ku milanteen xisbigii Tallada hayay oo ma jiro wax dheeraad ah oo aanu ololaha u samayno KULMIYE oo marka doorashada maamul ahaan wuxuu noola mid yahay axsaabta kale ee tartamaysa.”
Badhasaabku waxa uu ka hadlay Ururo iyo xisbiyo uu tilmaamay in wareegii labaad ee doorashada ay jabiyeen qorshihii Komishanku u dhigay axsaabta, waxaanu yidhi “Todobaadkii hore ololihii doorashadu jawi wanaagsan oo nadiif ah ayuu ku dhammaaday waanan uga mahad celinayaa todobada urur iyo xisbi ee ku tartamaysa doorashadda deegaanka. Hase yeeshee wareegii labaad oo Komishanku soo saareen qorshe ay wax kaga bedeleen hanaankii ololaha magaalooyinka waaweyn ee darajada (A) waxaanay mamnuuceen in Gaadiidka iyo taageereyaashu ay dhex yaacaan jidadka Magaaladda waxaanay amreen in axsaabtu ololahooda ku qabsadaan xarumahooda.”
“Waxa jiray in ay Ururka UMMADDA oo lagu bilaabay wareegii labaad Isniintii waxay runtii ka taraareen Taageereyaasha Ururkaasi hanaankii komishanku u dhigay ololaha. Waxaanay Gaadiidka iyo Taageereyaashuba ay dhex marayeen jidadka Burco. Sidoo kale waxa xisbiga UCID isna wareegiisii labaad ee maalintii Salaasaddii ay Gaadiidkooda iyo Taageereyaashooduba ay jabiyeen sharcigii ololaha,”ayuu yidhi Cabdoo Axmed Aayir.
Badhasaabka oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “arrintaasi waxay nagu kaliftay inaanu maanta (shalay) Taageereyaasha xisbiga KULMIYE ku xakameyno inay ku ekaadaan xafiisyadooda oo qudha. Dadka sharciga jabinayaa ma aha masuuliyiinta iyo murashaxiinta axsaabta, hase yeeshee waa taageereyaasha Ururadda iyo xisbiyada oo u badan dhalinyaro isla markaana aan helin wacyi-gelin balaadhan oo ku saabsan ololaha doorashadda.”
Previous PostShirkadda AL-Nuur Furniture oo ku deeqday Daammurka 2 Km Waddada isku xidha Hargeysa iyo SallaxleyNext PostGolaha Deegaanka ee Tower Hamlets oo Bilad Guddoon siiyay Wasiirka Madaxtooyada Somaliland	Blog